Sidee dhakhso badan ayuu u duuliyaa 750w gawaarida taayirrada gawaarida dufanku ku kacdaa | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News Sidee dhakhso badan ayey u socotaa labalaab 750w mooto oo dufan ah oo culeyskiisu yahay baaskiil wadista
Taariikhda ： 2020-08-14 Qeybaha ：News/ blog Muuqaalada ： 2,137 aragti
Mid ka mid ah su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan ebikes waa xawaarehooda. Caadi ahaan, xawaare sare wuxuu macnaheedu yahay inay waqti badan ku lumiso wadada. Dadka badankood waxay door bidaan inay doortaan matoor awood sare leh si ay uga caawiso inay gaaraan xawaare kufiican. Tani 750w laba matoor baaskiil shidaalka korontada buuxin kara shuruudahaaga. Gawaarida korantada oo korantada sare leh waxay kuu keenayaan xawaare aad u sareeya, waxaadna ku raaxeysataa dareenka kacsiga adrenaline iyo fuulitaanka xiisaha leh.
Marka la barbardhigo inta badan buuraha e baaskiilka waxaa keliya oo la isticmaalaa mootada, giraangiraha hore iyo gadaal ee baaskiilka taayirrada dufanka korontada ku shaqeeya waxay adeegsadaan 750w matoorro koronto. Iyo laba matoor ayaa ka dhigaya mootadan taayirrada dufanka korontada leh laba nooc oo mootad ah oo ka shaqeeya habka badhanka kontoroolka. Mid waa labo matoor oo ka shaqeeya qaabka fuulitaanka buuraha, mid kalena waa hab shaqeynaya mootada gadaal u socota maalin kasta. Laba matoor ayaa keenaya wadaha xulashada labada qaab ee shaqada, iyo xawaaraha socodka kaladuwan waxay kuxirantahay shuruudaha wadista kaladuwan. Marka kaliya aad isticmaasho 750w oo ah mashiinka gadaal gadaal ka shaqeynaya si aad u fuusho baaskiilkan taayirrada dufanka korantada leh, xawaaraha ugu sarreeya waa 40-50km / h; laakiin isticmaal laba waddo oo shaqeynaya ayaa ka dhigi kara baaskiilada korantada ku shaqeeya baaskiil inay gaaraan xawaare sare 45-55km / h.
Xawaaraha 55km / h max wuxuu kaa dhigayaa inaad dareento mootada wadada. Iyo 750w laba-mootood oo duug ah ayaa bixiya awood ku filan oo xoog leh oo ka dhigaysa baaskiil taayirrada dufanka korantada leh inay si xor ah u kala dhex geli karaan kaymaha iyo buuraha. Markaa haddii isboorti ka baxsan, tareenka socdaalka, safarka maalinlaha ah ama safar gaaban, baaskiilkan taayirrada dufanku kululaan karaan dhammaantood way wada kulmi karaan. Hadda, waxaan ognahay sida dhakhsaha leh ee ay ugu dheereeyaan 750w mooto-baal laba koronto oo fuulista. Xaqiiji in baaskiilku meel fog u fuulo, waxay u isticmaashaa batari lithium 60v 18ah weyn ah sida korantada. Naqshaddeeda meesha laga saari karona waa mid aad ugu habboon oo isticmaalaha ah inuu batteriga ku qaato furaha oo uu helo meel ay ku yaallaan bareesyada ay ku dallacaan, keliya waxay u baahan tahay 6-8 saacadood oo dhammaystiray hal dallaal oo buuxa iyadoo la qaadayo 71.4V 3A. Baatariga wuxuu hubiyaa in baaskiillada korantada ku shaqeeya ay leeyihiin taageero koronto oo ku filan xawaare aad u sarreeya oo u dhexeeya 45km / saacaddii iyo 55km / saacaddii.
Taayirada dufanku sidoo kale waxay caawinayaan in baaskiilka taayirrada dufanka korontada ku shaqeeya si habsami leh u socdo xawaare sare. Dadka dherer ahaan kala duwan iyo dadku waxay u baahan yihiin, waxaa jira laba cabbirka cabbirka taayirrada caadiga ah ee aad dooran karto. Mid waa 26 "* 4.0 taayir dufan leh oo loogu talagalay dadka dhaadheer ama kuwa jecel taayirrada baruurta leh ee 26-inji ah iyo buurta marka laga baxo, mid kalena waa 20" * 4.0 taayir dufan leh oo loogu talogalay dadka badankood, tusaale ahaan, waayeelka, haweenka, ardayda kulleejka ah iyo kuwa safarka ah. Markay wadayaashu wadaan baaskiil 750w laba mishiin ah koronto koronto leh 50-55km xawaaraha ugu badan, ha ahaato 26-inch taayir dufan ah ama 20-inch taayir baruur had iyo jeer waxay siisaa qabasho xoog leh si looga fogaado taayirrada taayirka, waxay leeyihiin saameyn anti-silbasho ku filan. Wax kastoo aad u isticmaasho baaskiilkan korantada leh ee korantada leh ee 750w ah ee socdaalka, socdaalka, wadada ka baxsan, isboortiga banaanka, safarka maalinlaha ah, taayirada dufanka leh waxay sidoo kale siisaa wadayaasha khibrad raaxo leh iyada oo ay ugu wacan tahay saameynteeda keydka ah si ay u sii wado xawaare sare oo deggan.
La hadal xawaaraha, bareeg sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah baaskiilada korantada. Kaliya nidaamka bareega oo tayo sare leh ayaa joojin kara baaskiil koronto ku socda xawaare sare. Sababtoo ah nidaam jejebiyey oo tayo sare leh ayaa hubin kara kaxeeyayaasha inay raacaan amniga xaalad xawaare sare ku socda. Markaa 750w baaskiil dufan dufan leh oo koronto ku qalabeysan oo leh 180mm bareeg farsamaysan bir hore iyo gadaal gadaal, kuwaas oo leh xoog xoog birin, xitaa haddii buuraha hoose, roob, xaaladaha degdegga ah. Haddii aad dareento 750w laba matoor koronto koronto mashiinka korantada inuu ka sareeyo inta aad u baahan tahay, waxaa sidoo kale jira baaskiil 500w laba koronto leh oo wata 48v batari lithium laga yaabee inuu baahidaada la qabsado
Haddii aad xiiseyneyso laba baaskiil koronto oo aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waad baari kartaa qormooyin hore ama booqo annaga Websiteka rasmiga ah, sidoo kale dooro inaad kaga tagto fariintaada hoosta.
Tags:Baaskiil ku shaqeeya batari bushkuleeti mootooyinka
Ka hor: Waa maxay Baaskiillada ugu Wanaagsan Korantada Ka yar $ 1000
Next: Faa'iidooyinka iibsashada bushkuleetiga mootada korontada ku shaqeeya